Afrika : Ry Mpanjaka, aza mampiaka-bady intsony ianao! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Oktobra 2018 11:46 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Français, македонски, বাংলা, Español, English
Mpanao gazety sy olompirenena
Ankoatra ireo maro hafa, marobe ireo mpanao gazety ao Malawi no nandray anjara tamin'ilay kaonferansa Highway Africa [angl] natao tao amin'ny Oniversite Rhodes, tao Afrika Atsimo, ny 8 hatramin'ny 10 septambra 2008. Mifantoka amin'ireo media vaovao, ny media sy ny teknolojia, no sady koa ambohipihaonan'ireo saina tia karokaroka momba ny asa fanaovana gazety sy fetin'i Afrika io kaonferansa io, izay ny lehibe indrindra fanao isantaona ao amin'ireo mpanao gazety afrikàna (misy 700 eo ho eo ny mpandray anjara). Ny lohahevitra ho an'ny taona 2008 dia ny : Fanaovangazetin'olontsotra, fanaovana gazety ho an'ny olompirenena
Edna Bvalani [angl] manao tatitra fohy ny fizotr'ity kaonferansa faha-12 ity hatramin'ny 1996, no sady manipika ny lanjany ho an'i Afrika:
Ao anatin'ny vanimpotoanan'ny niomerika, mila ampy fitaovana tsara ny mpanao gazety mba hanangonany vaovao sy hanapariahany ny vaovao faran'izay haingana. Zavadehibe ny mahatakatra hoe ireo media dia fitaovana tsy maintsy ilaina amin'ny fampahalalambaovao ho an'izay resaka fampandrosoana demaokratika rehetra, ara-tsaina, kolontsaina, toekarena ary sosialy ho an'ny fiarahamonintsika.
Nandritra ilay kaonferansa, voatanisa tao ny Global Voices amin'ny maha-media azy ahafahana mampita ny feon'ireo olompirenena erantany..
Victor Kaonga, izay nandray anjara tamin'ilay kaonferansa, dia nametraka rohy anankiroa tao amin'ny bilaoginy Ndagha [angl] mitondra ho any amin'ireo lahatsoratry ny Global Voices
Ny lahatsoratra mamaky lay ao amin'io bilaogy io, nitondra ny lohateny hoe Hahavita mampifandray vohitra maro ve i Malawi ? [angl] no manazava ny fahasarotana atrehan'ireo manampahefana ao Malawi amin'ny fampifanohizana ireo faritra ambanivohitra ao amin'ny fireneny ho ao anatin'ny lalamben'ny filazambaovao [fahasarotana toy ny halafon'ny saran'ny fidirana aterineto, tsy fahampian'ny fotodrafitrasa sy ny fanofanana amin'ny fampiasàna ireo teknolojian'ny fampitambaovao sy ny fifandraisandavitra ]. Io lahatsoratra io dia tohin'ilay kaonferansa iraisampirenena nokarakarain'ny Commonwealth Telecommunication Oganisation [angl] natao tany Malawi tamin'ny 26 hatramin'ny 28 Aogositra 2008. Sehatra iray goavana nifampiresahan'ny afrikàna momba ny TIC io kaonferansa io; TIC natokana ho an'ny resaka fandrakofana eo an-toerana mba hampifandraisana ireo vohitra. Na izany aza, mitaraina ny mpanoratra io lahatsoratra io hoe tsy ananan'ny governemanta ao Malawi ny fotodrafitrasa sahaza sy ilaina mba hampifandraisana ny faritra ambanivohitra, sy ny andrenivohitra ihany koa:
Raha ny zavamisy amin'izao fotoana izao, ihomehezana i Malawi satria ny fahafahany miditra amin'ny tambajotra dia tsy mifanaraka amin'izay takiana, ary vokatr'izay, ny ankamaroan'ny ao amin'ilay firenena dia tavela eny anjoron'ny fahavakisana niomerika, satria tsy afaka misitraka ny fisian'ireo fitaovana maoderina ho an'ny fampitambaovao sy ireo teknolojian'ny fifandraisana. Raha tian'ny governemanta ny hamadika ho tena izy ny tetikasany ho fampifandraisana ireo faritra ambanivohitra ao Malawi, tsy misy afa-tsy ny firotsahana bebe kokoa sy fihazakazahana hamaha ireo fahasarotana no hahafahany manatanteraka izany. Raha tsy izay, dia hijanona ho nofinofin-gadra fotsiny ihany.
Mila mainga ny sidina “Air Malawi”
Mandray anjara amin'ny fifanakalozankevitra momba ny varotra vitan'ny orinasa fitaterana an'habakabaka nasionaly Air Malawi [angl], izay misedra olana goavana ara-bola, ilay mpahay toekarena sady bilaogera vaovao, Watipaso Mkandawire [angl]. Taorian'ny nanomezany ohatra vao haingana momba ireo firenena nanome ho an'ny tsy miankina ny orinasa fitaterana an'habakabaka nasionaly tany aminy, soratan'ny mpanoratra ity lahatsoratra ity, izay miasa hatry ny ela momba ny olan'ny fampiasambola ao Malawi, hoe:
Heveriko fa ny tohankevitr'ireo izay mikatsaka ny hitahirizana ilay “fananampirenena” dia toy ny fikatsahana hitahiry 100% ny 0 (aotra), raha tokony hitahiry, ndeha hataotsika hoe 49% na 10% amin'ny 100. Ara-teknika dia tsy avotra intsony ny Air Malawi ary ny fikasana hitahiry io orinasa io amin'ny endriny misy azy amin'izao fotoana izao dia famitahana ireo mpandoa hetra ao Malawi, izay mila izany vola izany mba ho ampiasaina amin-javatra hafa mahasoa (fahasalamàna, fanabeazana, sns…). Zambia tsy manana orinasa fitaterana an'habakabaka nasionaly, nefa ny seranampiaramanidiny dia ahitàna fivezivezena betsaka noho ny ao Malawi. Mitombo isanandro vaky ilay orinasa tsy mainkina miasa any… Tsy maintsy atao varoboba ve i Air Malawi ary mamorona orinasa iray iaraha-mitantana amin'ny COMAIR? Ombako izay alaolana izay. Ahoana ny hevitrareo?
Torohevitra iray ho an'ny mpanjaka Mswati ao Swaziland
Kondwani Munthali, mpanao gazety ao Malawi, nanoratra lahatsoratra iray momba ny fankalazana ny tsingerintaona faha-40 nahazoan'i Swaziland ny fahaleovantenany (izay natrehan'ny filohan'i Malawi, Bingu wa Mutharika). Ao anatin'ilay lahatsoratra [angl], mitondra lohateny hoe Mankalaza fahantràna : ny tantara mankahery tao Swaziland, iangavian'ilay bilaogera ireo mpitondra afrikàna mba hanoro hevitra ny Mpanjaka Mswati tsy hampiaka-bady intsony.
Antenaiko mba hisy iray amin'ireo mpitondra antsika hiteny amin'i Mpanjaka hoe fotoana izao tokony hitsaharany tsy hampiaka-bady intsony isak'izay misy maha-mendimendy azy, tsy manatsara zavatra izany ao anatin'ny ady atao tsy hiparitahan'ny aretina SIDA, na ho an'ny fijery ny firenena iray izay mitady ny lalan-kizorany manoloana ny nentin-drazana sy ny vaninandro maoderina.
Lazaina fa “ny mpanjaka irery ihany no hany afaka manova ny fomba fanao”. Resy lahatra aho fa ny Mpanjaka Hajaina ao Swaziland dia afaka ny hampiroborobo ny kolontsaina swazi mahafinaritra miaraka amin'ireo tena fahalalahana marina sy ny fandaniambolam-panjakana mampiseho ny fahavononan'ny mpanjaka hijery ny vahoakany. Mila mikarakara ny vahoakany ny mpanjaka alohan'ny hikarakarany ireo vehivaviny (vadiny) !